MARA Bombardier / Northrop Grumman E-11A Sentinel FSX & P3D - Rikoooo
Nlereanya site na IRIS Simulations, nke S Petersen dere, mmelite site n'aka Chris Evans
Emelitere na 30 / 07 / 2018: Agbakwunyere TCAS II na-arụ ọrụ, gbakwunyere igwe onyonyo V-Speed, gbakwunye GPWS na-arụ ọrụ, ọrụ obibi ọhụrụ: Polish Air Force, NASA, USAF, USAF 2. Ugbu a dakọtara na Prepar3D v4. 3
Mara mma nlereanya nke a ụgbọelu version E-11A Sentinel USAF ngwugwu gụnyere omenala na-ada, 3D ụlọ na zuru ezu VC, HUD, FMC, GPWS, ihe eserese, 2D Panel na ndị ọzọ.
Bombardier BD-700 Global Express bụ a ugboelu ugbo elu azụmahịa nnọọ ogologo nkwụsị nso. Bombardier malitere ọmụmụ na 1991 na Global Express oru ngo, na ụgbọ elu e eze ulo oru na 1993. The mbụ ụgbọ elu ahụ weere ọnọdụ 13 October 1996.
The USAF na November 2015, anọ Global Express onwem na Northrop Grumman si BACN usoro (egbughị Airborne Communications ọnụ), ma ọ bụ airborne nkwukọrịta ọnụ n'elu n'ọgbọ agha) dị ka airborne ọsọ agba anọ na E-11A designation. (Wikipedia)
Onye edemede: Nlereanya site na IRIS Simulations, nke S Petersen dere, mmelite site n'aka Chris Evans